Shirkadda Albayrak oo xayiraad shaqo ku soo rogtay Maareeyaha cusub ee Dekadda Muqdisho iyo Ra’iisal wasaare Xasan Kheyre oo wax ka qaban waayay kuna fashilmay, Yaa lala sugayaa xaalada?Warbixin | Newsomali
Shirkadda Albayrak oo xayiraad shaqo ku soo rogtay Maareeyaha cusub ee Dekadda Muqdisho iyo Ra’iisal wasaare Xasan Kheyre oo wax ka qaban waayay kuna fashilmay, Yaa lala sugayaa xaalada?Warbixin
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Shirkadda Turkiga ah ee gacanta ku heysa Dekadda weyn ee magaalada Muqdisho ay xayiraad shaqo ku soo rogtay Maareeyaha cusub Dekedda ee xukuumadda Soomaaliya ee uu dhawaan magacawday Ra’iisal wasaare Xasan Kheyre.
Sida laga soo xigtay ilo muhiim ah oo ku sugan Dekedda wakiilka shirkadda Albayrak ee Dekadda Muqdisho ayaa hor istaagay howshii Maareeyaha cusub ee dekadda Axmed Maxamed Washington.
Shirkadda Albayrak ayaa ku doodeysa in Maareeyaha dekadda aanu wax awood lahayn oo si toos ah ula shaqeynayo madaxa shirkadda ee dekadda, taasoo ay hore ugu soo dhaqmeysay intii ay la wareegtay maamulka dekadda Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in Raíisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Kheyre la ogeysiiyay dhacdadan balse waxba ka qaban waayay waxaana lala sugayaa arrintan inay wax ka qabtaan maamulaha shirkadda Albeyrak .
Shirkadda Albayrak ee gacanta ku heysa dekadda Muqdisho ayaa la sheegay inay la wareegtay dhammaan shaqaalihii dekadda iyadoo Maareeyihii horena uu ahaa gacan-yare la shaqeeya shirkadda, waxaana hadda xaaladda ku soo baraarugay xukuumadda cusub ee Soomaaliya.
In kastoo Ra’iisal wasaaraha dhawaan booqday dekedda hadana waa uu la socdaa waxaa meesha ka taagan waxayna tani qeyb ka tahay Fashilka xaga maamulka ee Xukuumadda Xasan Kheyre